Kylian Mbappe Oo Magacaabay Labada Ciyaartoy Ee Saamaynta
Xiddiga da’da yar ee Kylian Mbappe ayaa magacaabay laba ciyaartoy oo ka tegay PSG oo bixitaankoodu si gaar ah u taabtay, isla markaana uu ku bannaanaaday garab weheshi u ahaa.
Kylian Mbappe waxa uu sheegay in Lassana Diarra iyo Gianluigi Buffon ay u ahaayeen dad aanu illoobi doonin oo markii ay ka tageen PSG ay ku bannaanaatay meel aanay dadka kale u buuxinayn.
Diarra waxa uu joogay Parc des Prince sannad kaliya markii uu ku dhowaaqay inuu gebi ahaanba ciyaaraha ka fadhiistay, isaga oo kansalay heshiiskiisa PSG February 2019, kaddib markii ay heshiis ku gaadheen sidaas.
Laacibkan hore oo kasoo baxay kulliyadda da’yarta kooxda Le Havre, waxa uu u ciyaaray Chelsea, Arsenal iyo Portsmouth ka hor intii aanu sannadkii 2009 tegin Real Madird.
Kaddib waxa uu tegay Ruuska oo kooxaha Anzhi Makhachkala iyo Lokomotiv Moscow uu waqtiyo kusoo qaatay, waxaanu dib ugu soo laabtay Faransiiska oo uu muddo 18 bilood ah uga ciyaaray Marseille, ka hor intii aanu u duulin waddanka Imaaraadka Carabta oo uu kaga mid noqday kooxda Al Jazira, hase yeeshee dalkiisa ayuu ku laabtay oo uu PSG aakhirkii cimrigiisa ciyaareed joogay.
Kylian Mbappe waxa uu xasuusan yahay oo uu waayey waanadii iyo talooyinkii Diarra. Sidaas oo kale, Buffon oo xili ciyaareedkii 2018-19 u ciyaaray PSG ayaa wax badan u sheegi jiray muddadii koobnayd ee uu joogay.
“Wuxuu ahaa Adeero Lass, walaal weyn oo aad ku xisaabtami karto.” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Kylian Mbappe.
21 jirkan waxa uu sharraxay sida ay naftiisa muhiimka ugu ahaayeen Diarra iyo Buffon, waxaanu yidhi: “Inta badan wuxuu iiga sheekayn jiray waayihiisii iyo kooxihiisii. Wuxuu sameeyey qaladaad uu anigana iga waaniyey. Wuxuu i caawiyey waqtiyo aan xaalado adag ku jiray. Sida heerkeedu sarreeyo ee uu u yaqaanay waxa uu ka hadlayo. Waxa uu tegay kooxo badan oo meelo kala duwan ah. Waqti hore ayuu waddanka ka tegay isaga oo kalidii ah. Mar walba waan jecelahay inaan dhegaysto dadka waaweyn. Buffon ayaa sidoo kale aad muhiim iigu ahaa aniga.”
Mbappe waxa uu qiray in Lassana Diarra aanu isaga oo kaliya waanin jirin ee sidoo kale uu Kimpambe waqti siin jiray, waxaanu yidhi: “Laakiin Lass aniga oo kaliya ilama hadli jirin. Sidoo kale wuxuu waqti badan siin jiray Presnel Kimpembe, waxaanu mar walba ka ciyaari jiray doorkiisa xataa marka aanu ciyaarta ku jirin. Taas ayaa aad muhiim u ahayd.
“Lassana aad baa looga ixtiraami jiray qolka lebbiska. Aniga dhibaato ayay igu ahayd inaan arko isaga oo tegaya. Sidoo kale waxa i dhibaysay inaan arko Buffon oo baxaya.”